Akụkọ - Anyị ga -aga ihe ngosi Chinaplas 2021 na Shenzhen site na 13 Eprel ruo 16 Eprel.
Anyị ga -aga ihe ngosi Chinaplas 2021 na Shenzhen site na 13 Eprel ruo 16 Eprel.
Anyị ga -aga ihe ngosi CHINAPLAS 2021 na Shenzhen site na 13th Eprel ruo 16th Eprel.
Ihe ndị a bụ ozi zuru ezu maka ihe ngosi a:
Ụlọ ntu anyị.: 16W75
Ụbọchị ngosi: 13th, Eprel. ruo 16 Eprel.
Ngwaahịa anyị: akwa PVC, akwa PP, akwa HDPE, mkpara PVC,
UPVC ọkpọkọ na akwa akwa, ọkpọkọ HDPE na akwa akwa
PP & PPR ọkpọkọ na akwa akwa, PVC PP ịgbado ọkụ profaịlụ PP.
Webụsaịtị anyị: www.ldsy.cn www.lidaplastic.com
Anyị na -atụ anya nleta gị!
Nkọwapụta ụlọ ọrụ plastik
Plastic metụtara ihe nwere ihe sịntetịkị ma ọ bụ ọkara sịntetik na-adị mfe ma kpụzie ya ka ọ bụrụ ihe siri ike. Njirimara igwe na igwe ha-ịdịte aka, nguzogide na-emebi emebi na enweghị ike-na-eme ka ha bụrụ akụkụ dị mma maka nrụpụta. Mgbe ejiri plastik mee ihe maka nrụpụta akụrụngwa mbụ (OEM), a na -akpọkarị ha plastik injinịa.
A maara na plastik nwere njirimara arụmọrụ dị elu. Ha na-echekwa ibu, ezigbo insulators, na-adị ọkụ ngwa ngwa ma na-eguzogide kemịkalụ, ịghara ikwu maka ọnụ ahịa. Yabụ, ụfọdụ plastik injinị na -ahụkarị na ụlọ ọrụ plastik, na -abụghị rọba sịntetị - dị ka Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) ejiri na nleba anya kọmpụta, ndị na -ebi akwụkwọ na okpu keyboard, Polyurethanes (PU) ejiri mee ihe dị ka akụkụ plastik siri ike nke ngwa elektrọnik ma ọ bụ nkwụsị ụgbọ ala. , Polycarbonate (PC) ejiri maka kọmpụta kọmpat, MP3 na ikpe ekwentị na isi ọkụ ụgbọ ala, Polyethylene (PE) ejiri mee ihe maka ndị na -ekpuchi eriri USB na akpa plastik kpụrụ akpụ na Polypropylene (PP) ejiri maka elektrọnik ndị ahịa, ihe mgbochi ụgbọ ala (ihe mgbochi) na sistemụ ọkpọ ọkpọ ọkpọ. ) –Hachie ihe injinịa ọdịnala ndị ọzọ dịka ọla na osisi.
Kemgbe 2013, China abụrụla onye na-emepụta plastik kachasị ukwuu n'ụwa, ihe ruru otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmepụta plastik zuru ụwa ọnụ, dị ka Statista si kwuo. Industrylọ ọrụ plastik dị na China hụrụ mmepụta mmepụta ka ukwuu n'ime afọ ndị a, n'ihi mmụba na-arịwanye elu maka plastik injinịa na ụlọ ọrụ dị elu dị ka mgbakọ ụgbọ ala na nrụpụta eletrọnịkị. Na 2016, enwere ihe karịrị ụlọ ọrụ na -emepụta rọba 15,000 na China, yana ego ha na -enweta n'ahịa ruru ihe ruru ijeri puku ijeri 2.30 (ijeri US $ 366). Mmepụta plastik n'ime obodo site na 2017 ruo 2018 ruru ihe ruru tọn nde plastik na akụkụ plastik dị nde 13.95.